22 Okwu e kwuru banyere ndagwurugwu ọhụụ:+ Gịnịzi bụ nsogbu gị, nke mere ndị gị niile ji gbagoo n’elu ụlọ?+
2 I jupụtara n’ọgba aghara, obodo nke na-eme mkpọtụ, obodo nke na-enwe aṅụrị.+ Ndị gị e gburu egbu abụghị ndị e ji mma agha gbuo, ha abụghịkwa ndị nwụrụ n’agha.+
3 Ndị ọchịchị gị niile dị ike+ agbaala ọsọ n’otu mgbe.+ A kpụrụwo ha n’ejighị ụta. Ha wee bụrụ ndị mkpọrọ. A kpụrụwo ndị gị niile a hụrụ, ha niile wee bụrụ ndị mkpọrọ.+ Ha agbagawo n’ebe dị anya.
4 Ọ bụ ya mere m ji sị: “Kwụsịnụ ile m anya. M ga-eji obi ilu kwaa ákwá.+ Unu esila ọnwụ na unu ga-akasi m obi n’ihi mbukọrọ e bukọọrọ ihe ada bụ́ ndị m.+
5 N’ihi na ọ bụ ụbọchị ọgba aghara+ na nzọda n’ala,+ ụbọchị mgbagwoju anya+ nke Ọkaakaa Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, nwere na ndagwurugwu ọhụụ. E nwere onye na-akwada mgbidi,+ a na-etikukwa ugwu.+
6 Ilam+ ji ụgbọ ịnyịnya agha nke mmadụ nọ na ya buru akpa akụ́. Kia+ ekpughewokwa ọta.
7 Ọ ga-erukwa na ụgbọ ịnyịnya agha ga-ejupụta na ndagwurugwu gị niile ndị kasị mma. Ịnyịnya agha ga-eguzoro n’ọnụ ụzọ ámá.
8 A ga-ewepụ ihe e ji kpuchie Juda. N’ụbọchị ahụ, ị ga-elekwa anya n’ebe a na-edebe ngwá agha+ n’ụlọ oké ọhịa.+
9 Unu ga-ahụkwa ebe ndị gbawara agbawa n’Obodo Devid, n’ihi na ha ga-adị ọtụtụ.+ Unu ga-emekwa ka mmiri nke si n’ọdọ mmiri ndịda na-asọba n’otu ebe.+
10 Unu ga-agụ ụlọ dị na Jeruselem ọnụ. Unu ga-akwatukwa ụlọ ndị ahụ iji mee ka mgbidi unu+ ghara ikwe nrịgo.
11 Unu ga-egwukwa n’agbata mgbidi abụọ ndị ahụ ebe mmiri nke si n’ọdọ mmiri ochie+ ga na-asọba. Unu agaghị elekwasị Onye Ukwu nke mere ya anya, unu agaghịkwa ahụ onye ahụ nke kpụrụ ya n’oge dị anya gara aga.
12 “Ọkaakaa Onyenwe anyị,+ bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, ga-akpọ òkù n’ụbọchị ahụ ka a kwaa ákwá,+ ka e ruo uju, ka a kwọchaa isi, ka e keekwa ákwà iru uju n’úkwù.+
13 Ma, lee! a ga na-enwe obi ụtọ, na-aṅụrịkwa ọṅụ, na-egbu ehi, na-egbukwa atụrụ, na-eri anụ, na-aṅụkwa mmanya,+ na-asị, ‘Ka a na-eri, na-aṅụ, n’ihi na echi ka anyị ga-anwụ.’”+
14 Jehova ekpugheworo m,+ sị: “‘Ruo mgbe unu nwụrụ,+ a gaghị ekpuchiri unu njehie a,’+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, kwuru.”
15 Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, kwuru: “Gaa, bakwuru Shebna,+ bụ́ onye na-elekọta ụlọ a, onye na-ahụ maka ụlọ a,+ sị ya,
16 ‘Olee ihe i nwere n’ebe a, oleekwa onye i nwere n’ebe a, nke mere i ji gwuoro onwe gị ebe ili ozu?’+ Ọ na-egwu ebe a ga-eli ya n’ebe dị elu; ọ na-awapụtara onwe ya ebe obibi na nkume dị elu.
17 ‘Lee! Jehova ga-eji ike tụda gị, gị dimkpa, ọ ga-ejikwa ike jichie gị.
18 Ọ ghaghị ịfụkọtasi gị ike, dị ka bọl a ga-atụpụ n’ala sara mbara. N’ebe ahụ ka ị ga-anwụ, ọ bụkwa n’ebe ahụ ka ụgbọ ịnyịnya nke ebube gị ga-aghọrọ ụlọ nna gị ukwu ihe mmechuihu.
19 M ga-akwapụ gị n’ọnọdụ gị; a ga-akwatukwa gị n’ọkwá gị.+
20 “‘Ọ ga-erukwa n’ụbọchị ahụ na m ga-akpọ onye na-ejere m ozi,+ bụ́, Elayakim+ nwa Hilkaya.+
21 M ga-eyiwe ya uwe mwụda gị, m ga-ewere ákwà ị na-eke n’úkwù kesie ya ike,+ m ga-ewerekwa ọchịchị gị nyefee ya n’aka; ọ ga-aghọkwara ndị bi na Jeruselem, tinyere ụlọ Juda,+ nna.
22 M ga-atụkwasị mkpịsị ugodi+ nke ụlọ Devid n’ubu ya, ọ ga-emeghe n’enweghị onye ọ bụla ga-emechi, ọ ga-emechikwa n’enweghị onye ọ bụla ga-emeghe.+
23 M ga-akụba ya dị ka mkpọ́+ n’ebe ọ ga-adịgide, ọ ga-abụkwara ụlọ nna ya ocheeze dị ebube.+
24 Ha ga-ekokwasị n’elu ya ebube dum nke ụlọ nna ya, bụ́ ụmụ na alaka, arịa ntakịrị niile, ma arịa ndị bụ́ ọkwá ma arịa niile bụ́ nnukwu ite.
25 “‘N’ụbọchị ahụ,’ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, ‘a ga-efopụ+ mkpọ́ ahụ+ a kụbara n’ebe ọ ga-adịgide. A ga-egbutu ya, ya adaa. A ga-ewepụkwa ihe e kokwasịrị n’elu ya, n’ihi na Jehova ekwuwo ya.’”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D23%26Chapter%3D22%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl